Ashley Young Younghood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Ashley Young Younghood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Genius kubada cagta oo ugu wanaagsan ee loo yaqaan Nickname; "Youngy". Su'aalkayaga Ashley Young Younghood Story iyo Xogta Aan Laheyn Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxaa ku jira sheekadiisa hore ee Nolosha hore, cilaaqaadka xidhiidhka, nolosha qoyska, xaqiiqda shakhsiyeed, nolosha xidhiidhka iyo, nolosha qoyska iyo waxyaabo kale oo aan la aqoon oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay waxa uu awood u leeyahay laakiin dhowr ka mida tixgelinta biography Ashley Young oo xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Ashley Young Younghood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Hore
Ashley Simon Young wuxuu ku dhashay maalintii 9th ee July 1985 ee Stevenage, United Kingdom. Waxa uu ku dhashay Cancer Jamaican, Mr iyo Mrs Luther Young.
Young ayaa ka soo qaybgalay Dugsiga John Henry Newman ee Stevenage. Tani waxay ahayd meeshii uu bilaabay kubbadda cagta. Xaqiiqdii, Young wuxuu ciyaaray kubadda iskuulka oo uu la socdo darawalka Formula One Lewis Hamilton, kaasoo ahaa isla sannadkan.
Marna ma uusan ka fogeyn xaqqa kubadda cagta ilmanimadiisa. Waxa uu ku dhashay kuna soo koray Hertfordshire wuxuuna bilaabay xirfadiisa dhalinyarada da'diisu tahay 10 ee Watford. Wuxuu noqday kooxdii ugu horeysay ee 2004-05 wuxuuna ka mid ahaa ciyaartoydii muhiimka ahaa ee Watford ee xilli-ciyaareedkii 2005-06.
Young ayaa sii waday inuu si wacan u ciyaaro Watford horyaalka Premier League, bisha Janaayo wuxuu ku biiray Aston Villa. Wuxuu ka mid ahaa kooxdii ugu horeysay ee Villa Park waxaana uu ku guuleystay abaalmarinta PFA Young Player of the Year ee 2007. 2009 June June 23, Young ayaa u saxiixay Manchester United lacag aan la shaacin. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Ashley Young Younghood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Xiriirka
Ashley Young waxa uu xiriir la leeyahay nolosha dumarka. Ma jiro qof kale oo ka mid ah caruurnimada caruurnimada, Nicky Pike. Labaduba waxay bilaabeen inay la sheekeystaan ​​markay weli dugsiga joogaan.
Laba Shimbirood oo Jacayl ah - Ashley Young iyo Nicky Pike
Ashley Young ayaa isku dayay inuu u dabaaldego xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeysay ee Manchester United isagoo ugu danbeyn ku biiray isagoo xiran funaanadda carruurnimada Nicky Pike. Si kastaba ha ahaatee, nasiib darrada ayaa dhacday.
Xiddiga garabka ka ciyaara ee England ayaa ka carooday markii uu mar hore ku baaqay xaflad arooska xaniinta 200,000 ka dib saacadaha 48 oo kaliya ka hor maalinta weyn ee 2011. Sababta loo soo waco arooskiisa weli wali lama hayn. Si kastaba ha noqotee, go'aankiisa ugu dambeeya ee uu ka tagay qoysaska labadaba waxay leeyihiin cagaha qabow.
Ashley wuxuu sameeyay afar sano kadib. Waxa uu xareeyay aroos kale oo wali wuxuu guursaday Nicky Pike.
Ashley Young ugu dambeyntii guursaday Nicky Pike
Labadaba waxay wada leeyihiin laba carruur ah, wiilka sagaal jirka ah Tyler iyo gabadha yar ee Ellearna.
Ashley Young ee quruxda badan
Ashley Young Younghood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -murma
Dabayaaqadii 2017, Young iyo Alli ayaa mar kaliya ku lug lahaa wareega xiga ee 30th markii Manchester United ay ka badisay Tottenham ka dib markii uu Young sheegay inuu wajahaya daafaca dambeedka midig ee Spurs Serge Aurier. Alli ayaa ku soo biiray, waxaana uu madaxa u raacay Young ka hor intaan ciyaartoyda labada dhinac aysan wax lug ah ku laheyn intii lagu jiray qeybtii hore ee ciyaarta.
Fikradaha u dhexeeya Young iyo Alli sii waday ka dib markii garsoore Jon Moss uu isku dayay inuu qaldamo. Dadku waxay fahmeen in Alli wargaliyay 32-sano jir waa inuu 'ka fariisto jimicsi'. Young, oo ku guuleystay Premier League, FA Cup, League Cup iyo Europa League United, ayaa la rumeysan yahay inay ka jawaabtay talo bixin Alli isaga oo aan la hadleynin si ixtiraam la'aan ah ilaa uu ku guuleysto wax.
Dhalinyaradu waxay soo afjareen khiyaanadii adigoo u sheegaya Alli: "Ogeysii marka aad ku guuleysaneyso Prem." Fikradaha ayaa sidoo kale la fahamsan yahay inay sii wadeen tunnel ka dib ciyaarta ka dib markii ay guushu gaartay Young.
Dhallinyaradu way ku qosleen Allidib u soo laabashada ciyaarta ka dib tweet kaas oo akhriya: "Ruux Raadiye ah. Natiijo Aad u Fiican. Kala Hadal Fiican. "
Ashley Young Younghood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Qoyska
GABAAN: Wiilkiisa Jamaican, Luther Young ayaa taageeray Tottenham Hotspur. Luther wuxuu qadariyay qoyskiisa aad u sarreeya-dhinac kastoo quruxda quruxda leh waa inuu bixiyaa.
HOOYO: Ashley Young ee Jamaican Hooyo Sharon maaha wax kale oo loo diro sanduuqyo digaag ah oo laga cuno digaag-yar-yar oo guriga lagu kariyey iyo basbaas Jamaican ah. In ereyada Young ... "Cuntadu waxay xusuustaa caruurnimada. Way ku faraxsan tahay in hooyaday iyo dhaxalkayga ay ka yimaadeen Jamaica. Markii aan sii koraayay taas oo ahayd mid aad u badan waxa aan cunay. Waxay igu xasuusisaa taariikhdayda ".
Sharon Young iyo ninkeeda ayaa weli ku nool koonfurta halka Young uu naftiisa ku yahay woqooyiga magaalada Manchester.
KOOXAHA: Waxa uu leeyahay walaal ka weyn (Martin Young) oo taageera Arsenal. Halyeeyga iyo himilada jilitaankiisa iyo banaanka garoonka wuxuu ahaa Ian Wright. Mar labaad, Ashley ayaa sidoo kale leh laba walaalo oo kubad ciyaara, Lewis Young, oo kulankiisii ​​ugu horeysay u ciyaaray Watford ee 2008, iyo Kyle Young, oo bishii April 2009 ku tababaray Akadamiyadda Arsenal.
Haa, Kuwaas waxaa laga yaabaa in ay yihin magac, laakiin waayo-aragnimada ay qoysku ku leeyihiin kubadda cagta waa mid aan loo ekeeyn. Martin Young waa 6 sano ka weyn yahay Ashley. Ashley waa sanadihii 4 ee ka weyn Lewis iyo Lewis waa 7 sanado ka weyn kan Kyle.
Lewis waxa uu muddo dheer shaqeynayay oo uu ka mid ahaa Burton, Northampton iyo hadda Crawley. Martin iyo Kyle labadaba labaduba waxay arkeen riyooyinkooda xirfadahooda ah ee loo yaqaan sababo kala duwan. Qeybta afaraad ayaa si joogto ah ula xariirta sheekada Whatsapp ee kooxda, iyadoo Lewis iyo Ashley ay si gaar ah ugu xiran yihiin da 'yarkooda ku xirnaanta da'dooda iyo xitaa isbeddelada isdaba jooga ah ee garabka ka ciyaara.
Xaqiiqdii, ka soo ciyaarista England oo ku guuleystay horyaalka Premier League, si ay ugu dardar galiso horyaalada hoose, si ay u dareemaan dhaawacyo halis ah oo nasiib u yeeshay mustaqbalkooda kahor inta aysan bilaabmin - Dhallinyarta ayaa arkaan dhamaantood.
Ashley Young Younghood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Personality
Ashley waa kansar waxayna leedahay sifooyinka soo socda oo ah shakhsigiisa;
Ashley Young ee xoogagga: Tenacious, maskax ahaan, u daacadnimo, noqoshada shucuur, caan ah, iyo caqli gal.
Ashley Young oo liita: Moodi, feker ahaan, shaki, cagajugleyn iyo ammaan la'aan.
Maxay Ashley Young jecelyahay: Farshaxanka, hiwaayadaha guriga, saldhigga u dhow ama biyaha, caawinta kuwa aad jeceshahay, cunto fiican oo saaxiibo ah
Maxay Yihiin Ashley Young: Shisheeyaha, dhaleeceyn kasta oo hooyo ah, oo muujinaya nolosha qofka.
Ashley Young Younghood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Dhibaatooyinka Dumarka
Ashley Young ayaa loo calaamadiyay inuu yahay macalinka ugu caansan horyaalka Premier League. Waxaa si aad ah loogu eedeeyay in uu quusiyay saxaafada. Intaa ka badan, Young ayaa mar qirtey Sir Alex Ferguson Alex Ferguson iyo David Moyes oo ku saabsan quusta si ay u helaan faa'iido aan cadaalad ahayn.
Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Ashley Young Childhood Story iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!
Michael Carrick Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan sheekooyinka sawir la'aanta
Adebayo Akinfenwa Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Danny Ings Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Raheem Sterling Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha Aan Laheyn